Umgaqo osisiseko we-Assay Fire (imigaqo-nkqubo yendlela)
Zininzi iindidi kunye neenkqubo ezahlukeneyo zokusebenza, kubandakanya uvavanyo olukhokelayo, uvavanyo lwe-bismuth, uvavanyo lwe-Iron-Iron-Iron-Scans, njl njl. Nangona kunjalo, imigaqo yokunyibilikisa kunye nokuthatha inxaxheba kwiindlela ezahlukeneyo ze-Assay zisenezinto ezininzi ngendlela ekhokelayo. Phakathi kuzo zonke izidasi zomlilo, ezona ziqhelekileyo zisetyenziswa kwaye kubaluleke kakhulu yi-assay ekhokelayo. Inzuzo yayo kukuba ukukhokelwa kwesiphumo kunokuqubha. Ukudityaniswa kwetekhnoloji yokukhokela i-assay kunye ne-gooot inokuthi icebise iintsimbi ezixabisekileyo kwiigram zeesampuli kwi-Aggregates enobunzima obuziilligrams ezininzi. Kwi-assay ekhokelayo, inqanaba lokuqokelela kwe-AU> I-99%, kwaye kusekho izinga lokufumana ubulungisa oluphezulu kwi-AU ephantsi njenge-0,2 ~ 0.3g / T. Ukuchaneka kohlalutyo lwe-Assay ekhokelayo kwi-Macro kwaye traceta iintsimbi ziphezulu kakhulu. Oku kulandelayo yinkcazo emfutshane yomgaqo-siseko wokucima umlilo kunye ne-assay ekhokelayo njengomzekelo.
I-Assay yomlilo ekhokelayo ihlulwe ikakhulu ibe ngamanqanaba ama-3:
(1) ukunyibilika. Isebenzisa iirejista eziqinileyo ukuxubana namatye, iimveliso ezinamafutha, ubushushu kwaye zinyibilike kwi-Folles State (ebizwa ngokuba yiThoba, ebizwa ngokuba yi-Alking Amaqhosha, ebizwa ngokuba yiNqaku ). Ngenxa yobume obuphezulu be-alloy ekhokelayo, inyibilika emazantsi embizeni. Kwangelo xesha, i-oxis yentsimbi yentsimbi kunye neqela lesampulu yesampulu ye-flue, i-borax, kunye ne-sodium, kunye ne-sodium, i-sodium ye-staatate ye-startives entloko ngenxa yobuninzi babo obuthile. , Ukuyahlula igolide nesilivere kwisampulu. Ke ngoko, ngexesha lenkqubo yokucoca umlilo, zombini izinto zokubongoza iisampulu kunye nokuphucula izinyithi ezixabisekileyo zidlalwa.
(2) U-Ash wavutha. Beka i-Alhed efunyenwe kwi-Ashtray kwiqondo lokushisa elifanelekileyo le-ASH evutha ukususa ukukhokela. Ngexesha lokuvuthuza uAsh, ukukhokelwa kukukhokela i-oxide kwaye ungene kwi-poroud Ashttray, ngaloo ndlela isusa isinyithi esikhokelayo kunye nesilivere encinci kunye nezensi exabisekileyo kwaye ihleli kwisitya se-ASH amasuntswana egolide kunye nesilivere.
(3) Ukwahlulahlulahlula kwegolide. Sebenzisa i-nitric acid ukuchitha i-Gold-Newnels ye-Golds Golides ukuba ichithe isilivere ngelixa igolide ihlala iqinile. Emva kokucima, ubunzima obufunyenweyo begolide ukubala umxholo wegolide. Umxholo wesilivere ububalwa ngokusekwe ngumahluko phakathi komgangatho wamasuntswana anegolide egolide kunye nomgangatho wegolide.
Emva kwendlela ye-ossoy ye-ossoy igqibe ukwahlukana negolide, isilivere kunye neentsimbi ezixabisekileyo, ukongeza kule ndlela ichazwe ngasentla ye-Gravic yokufumanisa igolide kunye nesilivere, emva kokuphelisa igolide kunye ne-Aqua Grejia, ezahlukeneyo zohlalutyo lweekhemikhali Iindlela zinokusetyenziselwa ukumisela igolide, isilivere kunye nezinye izinyithi ezixabisekileyo.
YANGAPHAMBILI Indlela yezithako ze-ASAY
Sebenzisa igolide yokuthambisa OKULANDELAYO